Christopher Columbus – Ka Yoomiyaad | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qiso uu Igaga Sheekeeyay Oday Waayeel Ah
Maxamuud Axmed Muuse, November 12, 2018
Miski Cabdinuur Salal, May 2, 2019
Axmed Maxamed Sulaymaan ‘Shiraac’ — December 8, 2019
Toddobo iyo toban kii September, oo Isniin ah, galbeed b’aan u socday oo jarnay konton liig habeen kii iyo maalin tii. Maayad wacan baa nagu gargaaraysay majaraha.
Aroor tii muuqaal cushub baa soo siyaadayay u muuqday sidii dhiro webi, oo mid kood raggii ku arkay qooqab nool. Kan oo’n ugu faro adaygay si ay dhammaan u arkaan oo cindiga u geliyaan berri. Biyaha baddu waa ka milix yaraayeen kuwii ‘Canaries’ ee aannu ka soo baaryoonnay.
Tan oo’n ku dukhuulay in badan in ay dhadhamiyaan. Geyreyaashu, giddi, waa fududaayeen. Qof kasta waa faraxsanaa, oo kor’aa baxridi fiicnayd u baxday si ay u bidhaamiyaan berriga u horreeya. Kalluun huduf ah ayaa dhinac wal ba naga marayay oo hal ka dileen daaqim kii.
Calaamadahaas oo dhan baa ka imanayay galbeed, jihadaas oo’n aamminsanaa in fadliga Sarreeyaha Gacmihiisa ku jiraan guulo oo dhammi, aannu degdeg u arki doonno berri……
Sabtidii, September labo iyo labaatan keedii, b’aan u qaabeeyay majarhaygii G.W.G taqriiban, ku duway madaxeedii jihadan danbe oo jaray soddon liig. W’aan ku qasbanaa dabayshan cakiseed waayo dad kayg’aa ka gadoodsanaa fikirka in badahan an ay jirin dabayl u dhacda jihada Isbaaniya. Subixii ma jirin cushub laakiin galabnimadii waa soo qaro yeeshay…….
Salaasadii; xawaal kaddib na dabayl…
Qorraxdhicii baa Martin Alonzo u baxay dheegga sare ee markab kiisa oo si riyaaq leh ugu qayliyay in uu arkay berri. Jilbah’aan u dhacay oo ugu xamdiyay Ilaahay, maxaa culays igu hayeen xammilladaydu maalmahan danbe, raga ayaa niyadjabsanaa oo is la dhex marayay dhuxdhux ah in dib loo laabto.
Oo Martin Alonzo ku dhawaaqay, Ilaahay u roonaa addoomihiisa. Kuwii Nina ayaa wada fantay dakhal kii iyo marbad kii shiraaca oo wada sugay si ay u sugaan warka. In uu jiray shan iyo labaatan liig b’ay u egayd. Oo sidaas ugu muuqatay ilaa habeennimadii.
In majaraha laga beddelo K.G. b’aan amray, jihadaas oo berrigu ka muuqday. Afar liig b’aannu u goynay galbeed maalin taas iyo toddobo iyo toban K.G. habeennimadii, iskudar kow iyo labaatan, laakiin aan ragga ugu sheegay masaafad saddex iyo toban ah.
Sida baddu amlas u ahayd, baxri badan baa ku qobaysatay janbiga. Madaxdahablayaal badan b’aannu aragnay iyo kalluun kale.
Arabacadii, wixii lagu sheegayay berri daruur’ay ahaayeen, an na majarihii galbeed b’aan ku sii waday ilaa galab tii, oo kaddib u dhuftay K.G. Maalin iyo habeen, kow iyo soddon liig an ugu tiriyay afar iyo labaatan dadka. Sida webig’aa baddu ahayd, naftu jeclaysanayso oo mucdil ah.
Quus tii ragg’aa ku sii labanlaabatay niyadjab kan, laakiin in tii itaal kay ahayd w’aan dejinayay, aniga oo ka baryayay in ay adkaystaan woxoogaa kale iyo in wax wali ba u dhici doonaan sid’ay rabaan aakhirka…..
Tags: Christopher Columbus - Ka Yoomiyaad
Next post Waa Maxay Qandho Umuleed (Puerperal Sepsis)?
Previous post Waa Maxay Maadada Kimistariga?
About the Author Axmed Maxamed Sulaymaan ‘Shiraac’
Waa qoraa iyo aqoonyahaan ka tirsan Afrikaan. Qoraaga wuxuu qibrad u leeyahay afka Soomaaliga, kudhowaad 28 sano ayuu baariyey Afsoomaaliga asigoo ebyiyay:, isku-asalnimada afafka Soomaaliga iyo Carabiga, Naxwaha Afsoomaaliga ‘illaa 7 daabacadood’, midaeynta qoraalka Soomaaliga iyo turjumaadda iyo qoraalka ilaa 14 kitaab oo Afsoomaali ah. Qoraaga wuxuu hadda gacanta ku hayaa qaamuus ka kooban illaa 80,000 ee gelitaan leh, cilmi baaris etimoolijiyadda afka hooyo, manhajka kulliyad Afsoomaali ah iyo kutubta loo baahan yahay iyo qoraalka 6 buug oo kale. Qoraaga sidoo kale waa Madaxa Akademiyada Afka Soomaaliga ee Somalism.